1012 West Rankin Road, ePort Carling, e-Ontario P0b1j0
Real Estate Listings: » Residential homes » Cottages » CA » Ontario » Port Carling » 1012 West Rankin Road, ePort Carling, e-Ontario P0b1j01
Uma ubufuna ikotishi lasebusika elinamamitha ayi-150 we-waterfront, ama-bdrms ama-3 nama-bthrms ama-3, eduze nePort Carling, ngokubukwa okuhle kwe-SW negaraji lezimoto ezi-2 ne-boathouse eyodwa, lolu usuku lwakho lwenhlanhla. U-1012 West Rankin Road ubelikhaya lomndeni elithandwa kakhulu iminyaka engaphezu kwengama-40 ngaphandle nje kokulungiswa ngumasipala iMortimers Point Road w ukufinyelela okulula kuzo zonke izinkathi zonyaka. Izinga lokushayela elinendawo eningi yokupaka. Uhlezi eduze kwamanzi, unesiqhingi esihle esinamachashazi weLake Muskoka enendawo ethambekele emanzini. Phambi kwamanzi kunedokodo elidala lolwandle, kufaka phakathi i-slip bthse eyodwa enendawo yokuzijabulisa kanye nesiliphu esivulekile esiphindwe kabili. Ngakwesobunxele kune-gazebo esemanzini nolwandle olunesihlabathi. Iningi lendawo yokuhlala ezingeni eliphansi nge-walkout. ICottage ibigcinwe kahle futhi ivuselelwa ngephaneli kagesi yango-2010 ne-generator yeGenerac, i-air conditioning, isithando somlilo samafutha kanye nesifudumezi samanzi esisebenza ngowoyela ukuze kududuzeke futhi kube nomnotho kuzo zonke izinkathi zonyaka. (id: 27) Izici ZokwakhaIzixhobo: Umshini Ophakathi, Umshini Wokuwasha Umshini, Okomisa, Isiqandisi, I-Sauna, Isitofu, Isisheli, I-Microwave Eyakhelwe ngaphakathi, Ukumboza Amawindi I-Aluminium siding